Xildhibaano ka tirsan labada gole ee Federaalka oo M/weynaha ku eedeeyey faragelin… – Hagaag.com
Xildhibaano ka tirsan labada gole ee Federaalka oo M/weynaha ku eedeeyey faragelin…
Posted on 29 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Xildhibaano Cabdalla Xuseen Cali oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegay Madaxweyne Farmaajo iyo saaxibadiisa ay faragelin toos ku hayaan doorashada Koonfur Galbeed, iyagoo taageeraya Musharaxiin gaar ah.
“Madaxweyne Farmaajo wuxuu faragelin qaawan ku hayaa Maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan doorashada soo socota, faragelintaas waxa ugu horeeyo in Musharaxiinta qaarkood loo diiday inay is sharaxaan, maadaama ay yihiin muwaadiniin xaq u leh in tartamaan, faragelinta labaad waa Musharaxiin qaarkood ay dowladda si gaar ah u taageereysay, dhaqaalihii dalkan lagu maamulayay kartoomo inta loogu shubayo diyaarado loo saaray oo Baydhabo laga dejiyay”ayuu yiri Xildhibaan Cabdalla Xuseen Cali.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegay in arrintan ay kula xisaabtamayaan Madaxweynaha, isla markaana caddeyn u tahay in Madaxwene Farmaajo uu ku lug leeyahay musuq maasuq, maadaama lacagtii qaranka loo adeegsanayo doorashooyinka Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Cabdalla ayaa sheegay in faragelinta uu Madaxweyne Farmaajo ku haayo doorashada Koonfur Galbeed ay keeni doonto in xilkiisa dib u eegis lagu sameeyo, isla markaana uu xilkiisa ku weynayo haddii uu faragelinta ka joojin waayo Koonfur Galbeed sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu sheegay in Musharaxiin loo saaray diyaarad hub, ciidanka Milateriga iyo baabuurta aan xabadaha karin, taasoo qalqal gelisay ammaanka Baydhabo sida uu hadalka u dhigay.